China 4-Chlorophenoxyacetic Acid (4-CPA) orinasa mpamokatra sy mpamatsy | Lemandou
CAS No. 122-88-3 Milanja molekiola 186,59
molekiolan'ny C8H7ClO3 Bika Aman 'endrika Vovoka kristaly fotsy
fahadiovana 99,0% min. Teboka mitsonika 155-159 ºC
4-asidra Chlorophenoxyacetic dia afaka mampiroborobo ny biosynthesis sy ny famindrana biolojika amin'ny zavamaniry. Tsy vitan'ny misoroka ny fihenan'ny voninkazo sy ny voankazo, mampitombo ny tahan'ny fametrahana voankazo, mampitombo ny hafainganan'ny fitomboan'ny voankazo, mampiroborobo ny fahamatorana mialoha, nefa koa manatratra ny tanjon'ny fanatsarana ny kalitaon'ny zavamaniry, ary misy koa ny asan'ny herisetra. Ampiasaina indrindra amin'ny voatabia, voaloboka, legioma, hanatsarana ny vokatra sy ny kalitaon'ny vokatra, ary misy lanjany azo ampiharina.
Ny asidra 4-Chlorophenoxyacetic dia mpandrindra fitomboan'ny zavamaniry phenoxy miaraka amin'ny hetsika auxin. Izy io dia tototry ny faka, fotony, ravina, voninkazo sy voankazo, maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny fiasa biolojika. Ny vokany ara-batana dia mitovy amin'ny an'ny auxin endogenous. Manentana ny fizarana sela sy ny fanavakavahana sela, mandrisika ny fanitarana atodinaina, mitaona voankazo tokana, mamorona voankazo tsy misy voa, mampiroborobo ny fametrahana voankazo sy ny fanitarana voankazo, mitaona voankazo tsy misy voa, misoroka ny voninkazo sy ny voankazo, mampiroborobo ny fivoaran'ny voankazo, mihamatotra aloha, mampitombo ny vokatra, manatsara ny kalitao, etc.
Ampiasaina indrindra ho an'ny voatabia hisorohana ny fianjeran'ny voninkazo sy ny voankazo. Izy io koa dia azo ampiasaina hampitomboana ny famokarana sy ny fidiram-bolan'ny karazan-javamaniry isan-karazany toy ny baranjely, dipoavatra, voaloboka, citrus, vary, varimbazaha sns
Izy io koa dia afaka manatsara ny fitehirizana ary mampihena ny fihenan'ny legioma mandritra ny fitehirizana
Manaraka: Thidiazuron (TDZ)